Fakafaka : aza afangaro ny zavatra ! | NewsMada
Fakafaka : aza afangaro ny zavatra !
Eo ny fahasamihafan’ny kolontsaina, ny taona niainana, sns, fa na izany aza, mipetraka hatrany ny hoe « kanto », « mpanakanto », « zavakanto »… Faheno matetika amin’ireo vahiny ihany koa ny hoe : « ny kanto tsy azo tsaraina ». Ao ny miombon-kevitra amin’izay fa misy koa ny mandà marindrano. Tsy mitsara kosa, angamba, ny fahatsapana fa misy ny « mpihira » fa tsy « mpanakanto ». Ohatra ihany io hira io fa saika ahitana tranga tahaka izany ny ankamaroan’ny zavakanto.
Matetika anefa ireny mitondra ny anaran’ny kanto ataony ireny (mpihira, mpanao hosodoko, mpitendry gitara, mpandihy, sns), no mibahan-toerana sy mahazo laka, fa tsy ilay tena mpanakanto. Tsy mampaninona ny mpandihy, ohatra, ny mampiseho fihetsika sy fitafy mamoafady sy tsy mifanaraka amin’ny kolontsaina malagasy satria mpandihy izy fa tsy mpanakanto !
Raha io fomba fijery zavatra io, tsy tokony hifangaro mihitsy ilay asa na zavatra atao amin’ny zavakanto sy ilay antsoina hoe « mpanakanto ». Mahatonga ny vahiny sy ny mpikaroka sasany hilaza io fa « tsy azo tsaraina ny zavakanto ». Ny an-dry zareo, rehefa manao ilay asa, mpanakanto avokoa. Na sokitra miboridana sy tsy fampiseho olom-pady aza, ohatra, kanto izay aminy.
… Toa midika izany fa afaka na azo itsarana ny maha kanto ny zavakanto iray ny fitandroana ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao ary ny soatoavina tsy ho potika na sanatria ho voazimbazimba. Tsy mba tafiditra ao anatina raikipohy omen’ireo mpikaroka io voalaza io. Ho an’ny Malagasy sy izay mbola mahatazona ny maha Malagasy azy, tsy ho kanto mihitsy, ohatra, ny sary (pika, mihetsika, sokitra…) mamoafady.
Firy amin’ny mpijery, mpamaky, mpihaino, sns, zavakanto anefa no manaiky fa rehefa mamotika ny kolontsaina sy ny soatoavina, tsy zavakanto intsony izay ? Hoy ilay mpampianatra mpikaroka iray izay : « ilay zavatra kidaladala indray no zary hendry amin’izao vanim-potoan’ny fanatontoloana izao satria mihevi-tena tsy ho Malagasy intsony ny sasany fa mizahozaho ho Amerikanina na Frantsay na Angilsy, sns ».
Asa aloha izay fahamarinan’io voalaza io fa raha ny hita sy heno any amin’ny televiziona sy ny radio, toa tsy zavakanto raha tsy izay mamoafady, hany ka voizina mafy !